[solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Networking Problems » [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem]
1 [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 2nd November 2009, 2:16 pm
ကျွန်တော်အိမ်ကစက်မှာ Real အနေနဲ့Windows XP (SP2) တင်ထားတယ်ဗျ....ကျွန်တော်က လည်း Networking ကိုလေ့လာနေသူမို ့အငြိမ်မနေဘူးဗျ....အဲအိမ်ကစက်ကို Microsoft Virtual Mechine တင်ပြီးနောက်ထပ်....
XP (SP2)ထပ်တင်လိုက်တယ်...ပြီးတော့အဲ့ဒီစက်နှစ်လုံးကို Network ချိတ်တာမရဘူးဖြစ်နေလို ့ပါ...နည်းနည်းလောက်ဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါအုံး.....ကျွန်တော် VMWare သုံးဖို ့လည်းစိတ်ကူးရှိပါတယ်....ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့သူရှိရင်ပြောပြကြပါ......
2 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 31st December 2009, 4:14 pm
ဘီလူး wrote: ကျွန်တော်အိမ်ကစက်မှာ Real အနေနဲ့Windows XP (SP2) တင်ထားတယ်ဗျ....ကျွန်တော်က လည်း Networking ကိုလေ့လာနေသူမို ့အငြိမ်မနေဘူးဗျ....အဲအိမ်ကစက်ကို Microsoft Virtual Mechine တင်ပြီးနောက်ထပ်....
ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်နော်.....ကျွန်တော်ကတော့ VMware နဲ့ စက်တစ်လုံးထဲမှာသုံးကြည့်ဖူးပါတယ်။လက်တည့်စမ်းရင်းနဲ့ပေါ့။XP ရော Server 2003
ရောနှစ်ခုစလုံးတင်ပြီးသုံးကြည့်ပါတယ်။အပြင်မှာ Network ချိတ်တာနဲ့ဘာမှတော့သိပ်မကွာပါဘူး။အတူတူပါပဲ။ဒါပေမယ့် IP Address တူအောင်လို့တော့
VMware ရဲ့ Virtual Network Editor ထဲမှာနည်းနည်းလေးသွားပြိးချိန်ပေးရပါမယ်။ အဲဒါဆိုရင် IP တွေတူသွားပြိးတော့ ချိတ်ရတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ပြောတာလိုသွားတာများရှိရင် ကျန်တဲ့သူများကဝိုင်းပြီးတော့ ပြင်/ပြောပေးကြပါနော်
3 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 19th January 2010, 4:17 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-19
ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရင်တော့ Domain assign လုပ်တဲ့အချိန်မှာ User Name -Password တောင်းရင်
ဆာဗာ ရဲ့ User Name Password ထည့်ပေးလိုက် နောက်ပြီး windowXP ရဲ့ Firewall ကို off ထားလိုက် firewall ကို ဘယ်လိုoff မလဲဆိုရင် run-ncpa.cpl - local area connection-properties-advanced tab-setting-general tab- firewall ကို off ထားလိုက် အဲဒါဆိုရင် ရပြီထင်တာပဲ
4 ်သွားလို့ဗျို့ on 20th January 2010, 4:48 pm
ကိုယ်သုံးနေတဲ့စက်မှာ VM ထောင်ပြီးလုပ်ရင် အဆင်မပြဘူးနော်။
လုပ်ချင်ရင်တော့ VM ပေါ်မှာပဲ Client ရော Server ကိုရောနှစ်ခုစလုံးတင်ပြီးလုပ်မှရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့က
Domain ပဲချိတ်ချိတ် Computer Name ပဲပြောင်းပြောင်း Restart ပြန်လုပ်ပေးရတော့ စက်ပိတ်ရင် VM ပါပိတ်တယ်လေ
ဒါကြောင့် VM နဲ့ပဲ OS နှစ်ခုတင်ပြီးလုပ်တာကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။
5 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 22nd February 2010, 10:13 am
ကျွန်တော် လုပ်တာလည်း အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်....
xpကော၊ o3ကော တင်ပြီးလုပ်ပါတယ်(နှစ်ခုလုံး vm wareပါ)....
တစ်ခုနဲ.တစ်ခု ping မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်.....ipလည်း class အတူူတူူပေးပြီးပါပြီးာ
6 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 24th February 2010, 10:19 am
ကျွန်တော် စမ်းကြည်.ပြီးပါပြီ။ ။
OS နှစ်ခုလုံးက VM နဲ.စမ်းတာပါ
ပထမဦးဆုံး OS နှစ်ခုလုံးတင်ပါ ။။ ကျွန်တော်ကတော. xp နဲ. o3 ကိုတင်ပါတယ်။
OSတင်ပြီးရင် OS နှစ်ခုလုံးကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါမှ settings ထဲဝင်လို.ရမှာပေါ. ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ပြီးရင် OS တစ်ခုကိုရွေးပြီး settings ထဲဝင်ပါ။
ပထမ OS ရဲ.settings မှာ network ကိုရွေးရင် Adapter1,2,3,4 ဆိုပြီးတွေ.ပါလိမ်.မယ်
နောက်ပြီး Enable Network Adapter ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
Adapter Type:PCNET-FAST 3(AM79C973)
Attached to : Internal Network
Network Name: srv(ကြိုက်ရာပေးနိုင်ပါတယ်)
Cable Connected မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ
ဒါဆိုရင် OS တစ်ခုရဲ. Setting ပြီးပါပြီး
နောက်OS တစ်ခုရဲ. network Setting ကတော.
Enable Network Adapter(အမှန်ခြစ်ပေးပါ)
Adapter Type: PCnet-FAST 3(Am79c973)
Network Name: xp
OS နှစ်ခုစလုံးကို start လုပ်ပြီး network ကို class အတူတူပေးရင် network ရနိုင်ပါပြီး
လိုအပ်တာရှိရင် လည်း ဖြည်.ပြီးထပ်ပြောပေးကြပါ
7 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 24th February 2010, 6:14 pm
အခုလို ကိုယ်တိုင်စမ်း ကိုယ်တိုင်မျှဝေလိုက်တော့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
ပြီးတော့ အခုလိုု ကိုယ်တိုင်စမ်းလိုက်တော့ ပိုကောင်းသွားတယ်မှလား? အဲဒီ့လို သူများပြောတာမစောင့်ဘဲ ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးတော့ သူများကို ပြန်ပြောရတဲ့ အရသာက တကယ်နှစ်လိုဖွယ်ရာ ဖြစ်တယ်မှလား?
ကျွန်တော်က ဒီဖိုရမ်ကသူအားလုံးရဲ့ စိတ်တွေကို ဒီလိုဖြစ်စေချင်တာပါဗျာ။
8 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 4th March 2010, 1:28 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-08
ko phyo ပြောတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အခုမှစလေ့လာသူတွေအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့
အနည်းဆုံး server 1 လုံးနဲ့ client2လုံးလောက်ချိ်တ်ဆက်ပြီး AD, DNS စတာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်၊ သိတာတွေကိုလည်း share လုပ်စေချင်ပါတယ် ဆရာကြီးဝင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊။ vm လောကတိုးတက်စေချင်လို့ပါ
9 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 10th April 2010, 12:18 am
ကောင်းသော်အိပ်ချင်တရားနှင့် အိပ်ပျောနိုင် ကျ ပါစေ
အဲ လို သုံးချင် ရင်တော်
Virtual Machine မှာ Vitual Network Address တင်ပြီး
Loopback Cable နဲ ့သုံး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် လို ့လော်ဂျီကယ် အရစဉ်စားမီပါသည်
An RJ 45 Ethernet Network Jak Head has got 8 places for 8 wires
put one end ofacable into 1st place of the jak and the other end into 3rd cannal of the jack
put one end of another cable into 2nd place of the jak and other end of this cabled into6cannal of the jack
ဗမာပြည် တိုးတက်စေကြောင်း ....
10 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 19th April 2010, 9:04 am
MS vitrual machine ကိုတော့သုံးကြည့်ဘူးတယ် သိပ်မကြိုက်ဘူး၊ VMware ကိုသုံးကြည့်စေချင်တယ်၊ ကမ္ဘာမှာလည်း VMware ကအသုံးများပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ vmware နဲ့ပါတ်သတ်လို့တော့အတွေ့အကြုံနဲနဲရှိပါတယ်
vmware နဲ့ network ချိတ်ပြီး server 2003 တို့ AD တို့ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့
11 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 30th May 2010, 5:46 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-20
အခုကျွန်တော်က window7ပေါ်မှာ virtual pc2007 ကိုတင်ထားပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်က server2003 ရယ်၊ xpsp2 နှစ်ခုရယ် တင်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ window7 က internet ချိတ်ထားတယ်။
အခုကျွန်တော်လိုချင်တာက server2003 ကို internet ပေးပြ၊ီ XP နှစ်ခုကို ပြန်ခွဲချင်တာပါ။
အခုတော့ ဘယ်စက်မှ ချိတ်လို့မရသေးပါ။ သိတဲ့သူများပြောပြပေးကြပါလား။ ms loopback adapter ကို သုံးလို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်စမ်းတာမရလို့ပါ။
12 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 9th June 2010, 9:15 am
server2003 နဲ့ xp နှစ်ခုကို network အရင်ချိတ်ပါ။ ချိတ်ပုံချိတ်နည်းကတော့ အပေါ်မှာ ko phyo အသေးစိတ်ရေးပြထားပါတယ်။ network ချိတ်ပြီးရင် ICS ကိုသုံးရင်ရလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ virtual pc2007 ကိုတော့သိပ်မသိတော့ဘူး။ vmware တော့နဲနဲသိပါတယ်။
13 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 21st July 2010, 12:17 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-06-20
Virtual Machine အကြောင်း အများကြီး သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။ ကျွန်တော်က အသစ်ပါ။
networking ကိုစိတ်ဝင်စား ပြီး VMWare ကို သုံးနေပါတယ်။ နောင် သိချင်တာ ရှိရင် ဖြေပေးကြပါလို့။
14 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 25th August 2010, 9:57 am
vm ware မှာ boot ဖိုင်ပျောက်လျှင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း လုပ်လုပ်ကော ရပါသလား?
15 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem] on 27th August 2010, 1:25 pm
o3 ရဲ. IP ကို xp 2ခုမှာ gate way ထည့်ရင်ကော ရမလား မသိဘူး
မစမ်းဖူးဘူး။ စဉ်းစားကြည့်တာပါ ။ တကယ်လို့မရရင်လည်း ဘာကြောင့်မရလည်း ဆိုတာ ပြန်ပြောပြပါနော်။
16 [Problem] on 30th August 2010, 3:09 pm
vmware နဲ့စပြီး os တင်တဲ့အခါမှာ networking type ရွေးရပါတယ်။အဲဒီမှာ bridge networking type ကိုရွေးပါ။ပြီးရင် vmware ထဲက ip ကော ကိုယ့်စက်ရဲ့ ip
ရောကိုပါ class အတူတူပေးကြည့်လိုက်ပါ။ကျနော့်တုန်းကတော့အဲလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြောသွားဖူးတယ်။စမ်းကြည့်ပါလား။
ဖြေပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာလုံးအရောင်ကို အနီမသုံးပါနဲ့
17 Re: [solved]ကူညီစဉ်းစားပေးကြပါ (Virtual Machine နဲ့ Network ချိတ်မရလို့) [Problem]